डेंगु लागेकाले के गर्ने ? के नगर्ने ? यस्ता छन् डाक्टरका सुझाब » Khulla Sanchar
डेंगु लागेकाले के गर्ने ? के नगर्ने ? यस्ता छन् डाक्टरका सुझाब
सुनसरीमा डेंगु महामारीको रुपमा फैलिइसकेको छ । धरानलाई महामारी क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ । इटहरीमा पनि डेंगुको संक्रमण दिन दिनै बढिरहेको छ ।
इटहरी र धरानका हरेक अस्पतालमा डेंगु संक्रमित बिरामी छन् । यो बाहेक घर घरमा डेंगु सक्रमित बिरामी छन् । यो संक्रमण नियन्त्रणमा आउन अझै समय लाग्नसक्छ।
अझ भनौं, खासगरी एडिस जातको लामखुट्टे व्यापक भएका ठाउँहरुमा यसको भौगोलिक विस्तार हुँदै नजाला भन्न सकिँदैन। किनभने डेंगुको जोखिम सामान्यत कात्तिक मङ्सिरसम्म रहने गर्छ।
१ प्रसस्त आराम गर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरु संक्रमणका बाबजुद पनि स्कुल, कार्यालय वा आफ्नो व्यवसायमा व्यस्त हुने गरेको देखिन्छ, जसले बिरामीलाई झन् कमजोर बनाउँछ।
२ प्रसस्त झोलिलो खानेकुरा खाने । कम्तीमा एक जना वयस्कले पाँच चिया गिलास भन्दा बढी पिउने जस्तैस् दूध, फलफूलको जुस, जीवनजल, सुप आदि।
३ ज्वरो आएमा सिटामोलको मात्र प्रयोग गर्ने ९२४ घन्टामा अधिकतम चार ग्रामसम्म मात्र प्रयोग गर्ने ।
४ कपडा पानीले भिजाएर टाउकोमा राखिदिएर ज्वरोलाई केही हदसम्म नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ। भिजाएको कपडाले जिउ पुछिदिँदा पनि बिरामीले आराम महसुस गर्ने छ।
१ पानी मात्र बढी नपिउने। यसले लवणको मात्रा अनियन्त्रित हुनसक्छ।
२ फलेकसोन, ब्रुफ़ेन, एस्पिरिन जस्ता दुखाई कम गर्ने औषधिहरु प्रयोग नगर्ने।
३ एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग जताभावी नगर्ने ९चिकित्सकको परामर्श बिना प्रयोग नगर्ने।
हाल धरानमा देखिएको डेंगु धरानमा मात्र ुलामखुट्टे खोज र नष्टु अभियान केन्द्रित हुँदा विस्तारै अरु ठाउँमा पनि फैलँदै गएको छ र यो जहाँ जहाँ लामखुट्टे छ, त्यहाँ त्यहाँ नपुग्ला भन्न सकिँदैन। यसको लागि स्थानीय सरकारको मात्र सहायताको आश नगरी हामी स्वयंले यसको विरुद्ध अभियानमा अभिनुपर्छ।